Asomafo Nnwuma 28 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 28:1-31
Wokopuee Malta mpoano (1-6)
Wɔsaa Publio papa yare (7-10)
Wɔtoaa so kɔɔ Roma (11-16)
Paul kasa kyerɛɛ Yudafo a wɔwɔ Roma no (17-29)
Paul de akokoduru kaa asɛm no mfe abien (30, 31)
28 Bere a yekoduu dwoodwoo no, yehui sɛ wɔfrɛ saa supɔw no Malta.+ 2 Nnipa a ɛwɔ hɔ a wɔka pɔtɔ kasa* no daa ayamye soronko* adi kyerɛɛ yɛn. Na osu a na ɛretɔ ne awɔw a ɛwom nti, wɔsɔɔ ogya gyee yɛn nyinaa kama. 3 Nanso bere a Paul boaboaa nnua nketenkete bi ano de guu ogya no so no, ɔhyew no nti, ahurutoa* bi fii mu bɛkyekyeree ne nsa. 4 Bere a nnipa a ɛka pɔtɔ kasa no hui sɛ aboa bɔne no sɛn ne nsa ho no, wofii ase kekae sɛ: “Ampa ara, ɔbarima yi yɛ owudifo. Ɛwom sɛ wafi ɛpo no mu abedu dwoodwoo de, nanso Atɛntrenee* amma wankɔ so antena ase.” 5 Nanso Paul petee aboa no guu ogya no mu, na hwee anyɛ no. 6 Ná wɔrehwɛ kwan sɛ ɔrebɛhonhon anaasɛ ɔrebetwa ahwe awu amonom hɔ ara. Nanso bere a wɔtwɛn bere tenten a wohui sɛ bɔne biara anto no no, wɔsesaa wɔn adwene, na wofii ase kae sɛ ɔyɛ onyame. 7 Ná nsaase bi wɔ mpɔtam hɔ, na na ɛyɛ supɔw no so okunini bi a wɔfrɛ no Publio dea. Saa ɔbarima yi gyee yɛn fɛw so, na ɔde nnansa som yɛn hɔho kama. 8 Ná Publio papa da mpa so a ɔyare atiridii ne ayamtu.* Enti Paul kɔɔ ne nkyɛn, na ɔbɔɔ mpae, na ɔde ne nsa guu no so saa no yare.+ 9 Eyi sii akyi no, supɔw no so nnipa a aka a wɔyare no nso fii ase baa ne nkyɛn ma ɔsaa wɔn yare.+ 10 Nkurɔfo no nso kyɛɛ yɛn nneɛma pii de kyerɛɛ anisɔ. Na bere a yɛrefi hɔ akɔ no, wɔde biribiara a yehia maa yɛn, na wɔde guu ɛpo so hyɛn no mu. 11 Abosome abiɛsa akyi no, yɛfaa ɛpo so hyɛn bi a n’ahyɛnsode ne “Seus Mma.” Ná ɛhyɛn no fi Aleksandria, na na abetwa awɔw bere no wɔ supɔw no so. 12 Na yekogyinaa Sirakusa po so hyɛn gyinabea, na yedii nnansa wɔ hɔ. 13 Bere a yetu fii hɔ no, yɛtoaa so koduu Regio. Na da a edi hɔ no, anaafo mframa bi bɔe maa ne nnanu so no, yekoduu Puteoli. 14 Yehuu anuanom wɔ hɔ, na wɔsrɛɛ yɛn sɛ yɛntena wɔn nkyɛn nnanson. Afei yɛde yɛn ani kyerɛɛ Roma. 15 Bere a anuanom tee yɛn nka no, wofi hɔ behyiaa yɛn wɔ Apia Gua so ne Nsadan-Mmiɛnsa tɔnn. Na bere a Paul huu wɔn no, ɔdaa Onyankopɔn ase, na ne koma tɔɔ ne yam.+ 16 Afei de, yetumi koduu Roma. Na wɔmaa Paul kwan maa ɔno nko ara kɔtenae, na na ɔsraani a ɔwɛn no no ka ne ho. 17 Nnansa akyi no, ɔfrɛɛ Yudafo no mu atitiriw no hyiae. Bere a wohyiae no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmarima, anuanom, ɛwom sɛ menyɛɛ biribiara a etia ɔmanfo anaa yɛn agyanom amanne de,+ nanso wɔde me hyɛɛ Romafo nsa sɛ ɔdeduani wɔ Yerusalem.+ 18 Na bere a wɔhwehwɛɛ asɛm no mu wiei no,+ na wɔpɛ sɛ wogyaa me, efisɛ na menyɛɛ biribiara a enti ɛsɛ sɛ wokum me.+ 19 Nanso Yudafo no ampene. Ɛno na ɛma mede asɛm no kɔdan Kaesare,+ na ɛnyɛ sɛ ebia mewɔ biribi a mede rebɔ me man kwaadu. 20 Saa asɛm yi ho nti na mekae sɛ mepɛ sɛ mihu mo, na me ne mo kasa, efisɛ Israel anidaso no nti na wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn yi agu me.”+ 21 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yennyaa wo ho krataa biara mfii Yudea, na anuanom a wofi hɔ bae no mu biara nso mmɛbɔɔ wo ho amanneɛ, na wɔmmɛkaa wo ho asɛmmɔne biara. 22 Nanso yesusuw sɛ ɛyɛ papa sɛ yebetie w’adwene efisɛ nokwasɛm ni, matew-me-ho kuw yi+ de, yenim sɛ nkurɔfo kasa tia wɔ baabiara.”+ 23 Afei wɔhyɛɛ da a wɔne no behyia, na saa da no, nnipa pii baa baabi a ɔte no sen kan no. Na ɔkyerɛkyerɛɛ asɛm no mu kyerɛɛ wɔn, na odii Onyankopɔn Ahenni ho adanse frenkyemm, na ɔnam Mose Mmara+ ne Adiyifo no+ so kaa Yesu ho nsɛm+ a ɛtɔ asom, fi anɔpa kosii anwummere. 24 Ebinom fii ase gyee nea ɔkae no dii; ebinom nso annye anni. 25 Esiane sɛ na wɔn adwene nhyia nti, wofii ase sɛ wɔrekɔ. Ɛnna Paul kaa asɛm baako yi sɛ: “Honhom kronkron nam odiyifo Yesaia so kaa no yiye kyerɛɛ mo agyanom 26 sɛ, ‘Kɔ na kɔka kyerɛ ɔman yi sɛ: “Ɔte de, mobɛte nanso morente ase, na ɔhwɛ de, mobɛhwɛ nanso morenhu.+ 27 Efisɛ ɔman yi koma apirim, na wɔde wɔn aso atie kwa. Wɔakata wɔn ani sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremfa wɔn ani nhu da, na wɔremfa wɔn aso ntie, na wɔremfa wɔn koma nte ase, na wɔansakra amma mansa wɔn yare.”’+ 28 Enti munhu sɛ, nkwagye a efi Onyankopɔn hɔ yi, wɔde kɔ amanaman no mu;+ na sɛnea ɛte biara, wobetie.”+ 29 *—— 30 Enti odii mfe abien mua wɔ hɔ wɔ ofi a ɔno ara agye tua ho ka+ mu, na ogyee wɔn a wɔbaa ne nkyɛn no nyinaa kama. 31 Ɔkaa Onyankopɔn Ahenni ho asɛm kyerɛɛ wɔn, na ɔde akokoduru kɛse kyerɛkyerɛɛ Awurade Yesu Kristo ho ade,+ na biribiara ansiw no kwan.
^ Anaa “Kurommafo.”
^ Anaa “yɔnkodɔ.”
^ Greek mu no, wɔka no Di′ke, ebetumi akyerɛ nyamebea a otua bɔne so ka. Ebetumi nso akyerɛ atɛntrenee a wɔka ho asɛm te sɛ nipa.
^ Anaa “konkoruwa.”
Asomafo Nnwuma 28